Xoghayaha Qaramada Midoobay Oo Booqasho Lama Filaan Ah Ku Tegey Muqdisho Iyo Baydhabo | Berberanews.com
Home WARARKA Xoghayaha Qaramada Midoobay Oo Booqasho Lama Filaan Ah Ku Tegey Muqdisho Iyo...
Xoghayaha Qaramada Midoobay Oo Booqasho Lama Filaan Ah Ku Tegey Muqdisho Iyo Baydhabo
Muqdisho(Berberanews)-Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobeey Antonio Guterres ayaa booqasho lama filaan ah ku tegey magaalada Baydhabo, wuxuuna halkaas kula kulmay masuuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed.
Gobolka Baay wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran ee abaarta ay saameysay. Xanuunno uu shuban biyood ka mid yahay ayaa halkaasi ka dillaacay, iyadoo dad ka badan 110 qof ku nafwaayeen maalmihii lasoo dhaafay.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobeey Antonio Guterres, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in sidegdeg ah loogu gurmado dadka ay Abaarta saameysay si looga hortago macaluul baahda.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobeey oo sidoo kale booqday Magaalada Muqdisho, wuxuu intii uu ku sugnaa la kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’isul wasaare Khayre iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan AMISOM, kuwaas oo ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa xaalada ammaanka ee sii xumaanay iyo Abaarta baahsan ee kusii socota wadada macaluusha.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobeey Antonio Guterres oo booqashadiisa Soomaaliya tahay mid qaadan doonta maalin, ayaa noqonay tii ugu horaysay ee uu ku tago mudadii uu xilka hayay, ayaa ahayd mid aan hore loo shaacin oo lagu macneeyay inay tahay mid degdeg ah oo la doonayo in wax lagaga qabto Abaaraha.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobeey, wuxuu bartiisa Twitter-ka ku qoray inuu gaadhay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, isagoo yidhi, “Hadda ayaan Soomaaliya ku gaadhay booqasho degdeg ah si aan diiradda u saaro gaajada iyo daacuunka. Dad badan ayaa dhimanaya, waa in dunida ay si degdeg ah uga jawaabtaa xaaladda sii xumaanay. “ayuu ku qoray bartiisa Twitter-ka Guterres.
Dhinaca kale Qaramada Midoobay, ayaa ka digtay in macaluul ay ka dillaacdo Soomaaliya, Yaman iyo Nigeria ka dib markii xaalad halis ah oo macaluul ah lagaga dhawaaqay Suudaanta Koonfureed, bishii la soo dhaafay, waxayna Qaramada Midoobay codsatay in 4 bilyan oo dollay loogu gurmado dalalkaasi Afarta ah ee Abaarahu ay sida xun u saameeyeen.
Previous article“Waa inaan ka hadalnaa waxtarka dadka Soomaalida ay ku leeyihiin Mareykanka, halkii aan ka hadli lahayn dhowr qof oo dhibaato sababay” Farmaajo
Next articleBilicda Jasiiradda Sacaadadiin iyo Duruufaha ku Xeeran warbixin